> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka Nexus 4
Dhinacyada la sii daayo Nexus 5, Nexus 4 milkiilayaasha ayaa sugaya waqti dheer ah ee Android 4.4 update KitKat u Nexus 4 qalabka. Ugu dambeyntii, ka timaado, ka hor qalabka Android kale oo ay ku jiraan Nexus 7, Nexus 10 iyo Fiiro Galaxy 3, iwm wax kasta oo ay Android version aad rakibay on your Nexus 4, xasuustaa kor joogto ah taageero xogta. Taasi waa muhiim, gaar ahaan marka aad badiyay xog muhiim ah. Markaas waxa ku saabsan photos tirtiray on Nexus ah 4? Waxaa jirta waddo dadka si aad u hesho dhibaatada wuu ka bixi this. Next, maqaal ku saabsan yahay in ay ka hadalka sida inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Nexus ah 4.
Download barnaamijka Nexus ah 4 sawir kabashada for free
Ka hor inta aanan waxba qaban oo kale, waxaad u baahan tahay in ay Nexus 4 sawir kabashada software: Wondershare Dr.Fone for Android (Android Data Recovery) . Barnaamijka Tani waxay u ogolaaneysaa in aad si toos ah photos tirtiray iskaan ka Nexus 4 iyo soo ka mid ah. Waxa kale oo aad ku eegaan karo oo dhan sawiro ka hor soo kabashada. Waxaad kala soo bixi kartaa version tijaabo u ah hoos u si xor ah u leeyihiin isku day ah.
Fiiro gaar ah: sawiro ka sokow, waxa kale oo aad isticmaali kartaa software this inuu ka soo kabsado videos, xiriirada, fariimaha, music iyo dokumentiyo badan oo telefoonada Android iyo murriyado ( aragto liiska qalabka ay taageerayaan iyo Android halkan ).
Kabsado photos tirtiray on Nexus ah 4 2 tallaabooyinka
Ka hor inta soo kabashada: In loo sahlo debugging USB aad Nexus 4
Haddii aad karti debugging USB aad Nexus 4 ka hor, waxaad si toos ah u bilaabi kartaa dib u soo kabashada sida ay tallaabooyinka hoose. Haddii aan, waxaad u baahan tahay in ay haatan qarka u saaran. Waa mid aad u fudud. Tag Settings < About Phone <Tubada tirada dhista dhowr jeer ilaa helo qoraal ah in aad ka yar tahay sameeysa mod <Back to Settings < fursadaha Developer <Hubi debugging USB . Waxa kale oo aad eegi kartaa version Android aad Nexus 4 sidan ma haddii ay ogaadaan aad.
Tallaabada 1. Orod software oo ay bilaabaan aad ka baareyso Nexus 4
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka, waxa maamula on your computer. Markaas ka heli aad Nexus 4 xiran. Markii barnaamijka ogaadaa qalab aad, waxa aad soo bandhigaysaa doono suuqa kala ah sida soo socota. Guji Start si ay u bilaabaan aad ka baareyso Nexus 4 photos tirtiray waxa ku.
Tallaabada 2. Kulanka Xiisaha Leh ceshan sawiro aad Nexus 4
Waqtiga sawiridda, waxaad bilaabi kartaa previewing sawiradii laga helay Category memu. Calaamadee dhamaan photos in natiijada scan iyo mid aad rabto in aad doorato. Waxaan iyaga ku badbaadin si aad u computer adigoo gujinaya Ladnaansho .
Fiiro gaar ah: Ma aha oo kaliya Nexus 4, Wondershare Dr.Fone for Android sidoo kale ka shaqeeya weyn u aaladaha kale ee Android ka Samsung, HTC, LG, Motorola, iwm Waxaad kartaa aragto liiska qalabka ay taageerayaan halkan.
b Download version maxkamadda hoose ee lacag la'aanta ah si ay leeyihiin isku day ah oo hadda.